Mo Farax: Markii aan Soomaaliya ka imaanayey, qof walbaa ii saadaaliyey guul
Mo Farax: Markii aan Soomaaliya ka yimid, qof walbaa ii saadaaliyey guul
Orod-yahankaan caanka ah ayaa haatan hiigsanaya ku guuleysiga tartanka 10-kun oo mitir.
LONDON, UK – Orodyahanka asal ahaan Soomaaliga ah haysatana dhalashada Ingiriiska ee Maxamed Faarax ayaa sheegay in markii dalkiisa uu uga soo qaxay dagaal sokeeye tageyna Britain uu qof walba u saadaaliyey guul badan.
Laacibkaan afarta jeer hantay tartanka Orodka ee Olympic ayaa gaarey guulo waaweyn tan iyo markii uu bilaabay xirfadaan aadka u dhibka badan.
Guushii u dambeysay ayaa ahayd 4-tii bishaan September, sanadkan 2020, xilligaas oo uu jebiyey lama-dhaafaanka hal saac ee tartanka Diamond League kaasoo lagu qabtay magaala madaxda waddanka Belgium ee Brussels.
Riyada uu haatan leeyahay ayuu ku qeexay in uu ka qeybgalo Orodka 10-kun mitir oo xagaaga dambe ka dhacaya caasimada waddanka Japan ee Tokyo.
"Aad ayaan ugu baahanay, waxaana ahay mid aad u dhiiran," ayuu ku daray, isagoo dib celiyey xusuustiisa maalintii uu tamiyey in uu Orodyahan noqdo.
Gaaritaanka yoolkiisa tobbanka kun ee mitir ayuu ku nuux-nuux saday in uu maalin walba ku fekero isla markaana uu halkaas ka helo dhiiragelin.
"Wax walba waa macquul in la gaaro, waxaana ay u baahan tahay shaqo adag waana gaari karnaa," ayuu tibaaxay. "Waxaan xasuustaa markii aan ahaa caruur oo aan ka yimid Soomaaliya anigoo sideed jir ah kuna hadli karin erayo English ah, hadii qof walba wuxuu igu dhihi karay waxaan ku guuleysan kartaa bilado badan, waxaa i dhiiragelin jirtay boqorada oo iigu yeeri jirtay Mudane Mo Faarax – Waan rumeysan waayey mid kamid ah arrintaas. Waxay muujineysaa taasi in wax walba lagu geeri karo ad-adeeg badan iyo in aanan marna la niyad-jabin".
Mo Faarax ayaa haatan tusaale ay ku daydaan wuxuu u yahay Soomaali badan oo xiiseysa Orodka kuwaasoo qaarkood ku nool gudaha waddanka isla markaana ka qeybgala cayaaraha kala duwan ee dibada iyagoo qarankooda metelaya.
Yacquub Axmed: Soomaaliga "dhibanaha u ah" adoonsiga casriga
Soomaliya 26.08.2019. 12:03
Muwaadinkan ayaa waxa uu ka sheekeeyay "tacadi daran" oo lagula kacay.
Cadaalad loo raadinayo gabar 12-jir Soomaali ah oo "lagu dilay" UK
Caalamka 06.07.2019. 19:06
Dad loo xiray dil wiil Soomaali ah loogu geystay waddanka Ingiriiska
Soomaliya 20.07.2020. 19:00
Mooshin laga diyaariyey sharci la filayo in uu qalinka ku duugo Farmaajo
Soomaliya 26.02.2020. 14:00
Saaxiibada Boris oo Mareykanka loogu diiday in ay tagtay Soomaaliya
Soomaliya 21.08.2019. 07:14